Apenbaring 10 LB - Yohane Adiyisɛm 10 NA-TWI | Biblica
Apenbaring 10 LB - Yohane Adiyisɛm 10 NA-TWI
1Afei mihuu ɔbɔfo tumfoɔ bi a ofi soro resian ba fam. Na ɔhyɛ omununkum mu a nyankontɔn bɔ ne ti. Na n’anim te sɛ owia, na ne nan te sɛ ogya fadum. 2 Na nhoma ketewaa bi kita no a wabue mu. Ɔde ne nan nifa sii po so na benkum no si asase so. 3 Ɔteɛɛm maa ne nne woroo so sɛ gyata. Ɔfrɛe no, aprannaa ason no woroo so gyee so.
NA-TWI : Yohane Adiyisɛm 10